IPlume Grand Piano G3
Ngosizo lwe-technoloy, kungahle kube khona umehluko omncane phakathi kwethu nabadlali. Ngentshisekelo ephelele, upiyano, umculo nomoya, kuzolawulwa yithi. izigcawu eziningi, ubukhulu nemisebenzi, enhle nenamandla, kuyizinzuzo zechungechunge lomculi wepiyano ledijithali. Yenza umculo nokudlala upiyano kube yingxenye yezimpilo zethu.
Ubuqiniso bepiyano elikhulu eliphathekayo ngentengo engabizi. Ukungezwa okumangazayo kuhla lwe-YY oluhlonishwa kakhulu, i-ultra-portable XXx ifaka isenzo esisha sekhibhodi esabelayo se-Responsive Hammer Compact, i-Harmonic Imaging 88-key piano sampling, kanye nokuxhuma okwakhelwe ngaphakathi kwe-Bluetooth® ukuletha ukuthintwa kwepiyano okuhle kwephimbo nethoni ku intengo engabizi kakhulu.
I-Plume Portable Digital Piano YY-02
Umuzwa wesayensi nobuchwepheshe yisithwali sobuciko esibonisa abantu abalangazelela ikusasa. IPlume Intelligent Piano, ukuqaphela izithombe ngomqondo wesayensi nobuchwepheshe.Kusukela ekushintsheni komqondo kuya ekwandisweni kwengqondo, kulezi zinsuku, iPlume Intelligent Piano iba yinto engenakugwenywa emculweni. Uchungechunge lwemfashini lukaPlume Piano, lwenza abantu abathanda umculo bakwazi ukuzwa ukuthinta namandla kusuka enhliziyweni ekubukeni okuhlukile. Njengoba kungakaze kubonwe ngaphambili. Masidedele ndawonye.
Ugesi uPiano Omkhulu, Ipiyano Eqondile Yedijithali, UPiano Oqondile Kagesi, Ikhibhodi ye-Smart Piano, I-piano yedijithali ephansi, Ukulungiswa Kwepiyano Ledijithali,